I-China iKhaya lokuzivocavoca i-Gym Workout yezeMidlalo engeyiyo iSlip yesiqhelo eprintiweyo ye-Eco Friendly New TPE Fitness Yoga Mats uMvelisi kunye noMthengisi | NQ
Ikhaya lokuzivocavoca i-Gym Workout Sports Ezingatyibilikanga ngokwezifiso ezishicilelweyo ze-Eco Friendly New TPE Fitness Yoga Mats
I-yoga mat yenziwe nge-TPE yeprimiyamu yezinto ezinobungane eziqinisekiswe yi-SGS, i-Thermoplastic Elastomers (TPE) ziimodyuli eziphantsi ngokubanzi, izinto eziguqukayo ezinokuphinda-phindwe ngokubonelela ngokuzinza okuphezulu, ukuqinisa kunye nokumelana.
Ukuncamathela okukhethekileyo okungafunekiyo kokutyibilika kumacala omabini kunye nokuxinana okuphezulu kuneemethi eziqhelekileyo zeyoga, kubonelela ngokutsala okugqwesileyo kunye nokubambelela okuphezulu, kufanelekile ukuziqhelanisa neendlela ezininzi zeyoga. Isiliphu esingaphantsi kumgangatho weenkuni, umgangatho weethayile, umgangatho wesamente, ixesha elide, akukho latex, amandla aphezulu okuxhathisa iinyembezi, ukumelana nokufuma.
1.Ukungqonge okusingqongileyo Nge-6p yasimahla okanye yokuqinisekiswa kwamazwe aphesheya
I-2.100% inokuphinda isebenze kwakhona kwaye ibenokuboliswa ziintsholongwane.
3.Seldom inuka xa iqala ukusebenzisa.
4. Ukutsalwa okuqinileyo kunye nokuqiniswa okuphezulu.
5.Ifashoni eyahlukeneyo yokwenza.
6.Ulwabiwo oluphindwe kabini lubonakaliswe ngeeToni ezimbini.
Ukugqwesa kuzo zonke iintlobo zokuziqhelanisa njengoko ikwimde yezixhobo ezomeleleyo, ezihlala ixesha elide.
Le mathi yeyoga lolona hlobo luqhelekileyo nolona lusetyenziswa kakhulu. Unokufumaneka kwizitudiyo zeyoga, izikolo, iiklabhu zokomelela komzimba, ekhaya nangaphandle.
Abantwana banokudlala kuyo, sinokuhlala kuyo ukuze sibukele iTV.
Akukho PVC kwaye akukho phthalates enetyhefu, ke ayisiyongcono kuphela kokusingqongileyo kodwa isempilweni nayo wena.
Ubunzima obunzima kunye nokuqina okuphezulu, ukuhlala ixesha elide ukusebenzisa kunye nokuphatha.
Ubungqina bokungena kwamanzi kunye nothuli, kulula ukucoceka.
Ukuqina okubhetyebhetye kunye nokuqina okuphezulu, kunokunciphisa iintlungu eziveliswayo phakathi komzimba kunye nomhlaba.
Iimethi zethu zokuzilolonga ezibalaseleyo ziya kongeza intuthuzelo ekusebenzeni kwakho kweyoga. Imethi yethu engatyibilikiyo ilungile kuzo zonke iintlobo zeyoga, ngakumbi ukubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Inxalenye enye kwifilimu yokuncipha enengxowa yeyoga, iziqwenga ezi-4 ebhokisini
Siliqela labantu abasebenza ngomoya weYoga.Ukwaneliseka kwakho yiNjongo yethu.Siyazingca ngokunika enye yezona matshi zixineneyo kwintengiso.Ukudityaniswa kwethu okukodwa kwezinto ezivulekileyo nezivaliweyo zeseli kunika umxube ogqibeleleyo wombilo- Ukutsala ukubamba kunye nokugcina ngokudibeneyo ukogcina oomatshini beza ngemibala eyahlukeneyo eyomeleleyo nenomdla, kodwa engoyisi ukukhanya.
Egqithileyo I-2021 yokuthengisa okuThengisa ukuHanjiswa kweePilates zeYoga ezenzelwe ukuzivocavoca ekhaya
Okulandelayo: Ihowuliseyili ezemidlalo amagwebu umqeqeshi buqu amandla adjustable Cast intsimbi IVinyl nkxu Neoprene dumbbell
Ukuprintwa kwesiko leYoga Mats
Ukuzivocavoca ekhaya kwiGym Workout
Izixhobo zoBungqingqwa obuQhelekileyo bokuPhuma ngaphandle kwesiliphu seYoga ...